China Green Tea Chunmee 9368 fekitori uye vagadziri | Yibin Tea
Chunmee tii 9368
Chunmee tii 9368 inotora mashizha eti kana mabhureki, kuburikidza nehurongwa hwekurapa, kuumba, kuomesa, kuchengetedza zviwanikwa zvemashizha matsva, ane tii polyphenols, katekini, chlorophyll, amino acids uye nezvimwe zvinovaka muviri. d'Ivoire, Guine, Guine-Bissau, Gambie
Edza kusimba uye kupfava, zvishoma zvinovava
Mamiriro ekunze mu Africa anopisa uye akaoma, kunyanya kuWest Africa, iri mukati kana kutenderedza Gwenga reSahara. Iko kusingaperi kupisa hakutsungiririki. Nekuda kwekupisa, vanhu vemuno vanodikitira zvakanyanya, vanoshandisa simba rakawanda remuviri, uye vanonyanya kuita nyama-uye kushaya miriwo gore rese, saka vanonwa tii kubvisa girizi, kupedza nyota uye kupisa, uye kuwedzera mvura nemavhitamini. . Naizvozvo, vanhu vemuAfrica havanyanyo kunwa tii yakakosha sekudya.
Vanhu muWest Africa vajaira kunwa mint tii uye seiyi mbiri yekutonhora kunzwa. Kana vagadzira tii, vanoisa mukati kanokwana kaviri zvakapetwa tii sezvazviri muChina, uye vanowedzera shuga cubes neminti mashizha ekuravira. Mukuona kwevanhu veWest Africa, tii inonhuwira uye yakapfava chinwiwa chechisikigo, shuga chikafu chinonaka, uye mindi chinhu chinozorodza chekudziya kupisa. Iwo matatu akabatana pamwechete uye ane kuravira kwakanaka.
VaIjipita vanogara kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweAfrica vanowanzonwa tii pavanogamuchira vaenzi. Vanoda kuisa shuga yakawanda muiyi, kunwa inotapira tii, uye kunwa ino inotapira tii negirazi remvura inotonhora panguva imwe chete. Iyi tii inotapira zvekuti maAsia mazhinji anogona kusashandiswa.
Vazhinji vemuAfrica vanofarira kunwa girini tii nekuti vanoda girini uye vanoshuvira girini munzvimbo yavo yekugara, uye nekuti green tii inogona kuzorodza nyota yavo, kubvisa kupisa uye kubvisa chikafu. Iyo yakasarudzika kunaka uye kushanda ndizvo chaizvo izvo vanhu vemuAfrica vanokurumidza kuda pasi peakasarudzika mamiriro ehupenyu.
Pashure: Green Tea Chunmee 9369
Zvadaro: Green Tea Chunmee 8147